Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta Ee Ku Saabsan Neymar, Mbappe, Haaland, Messi, Rice, Soucek
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta ee ku saabsan Neymar, Mbappe, Haaland, Messi, Rice, Soucek
April 5, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Weeraryahanka reer Brazil Neymar, oo 29 jir ah, ayaa heshiis horudhac ah la galay Paris St-Germain ilaa iyo 2026 – kooxda reer France ayaa haatan diirada saareysa inay heshiis la mid ah ka hesho weeraryahanka reer France Kylian Mbappe, oo 22 jir ah (AS)
Weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland ayaa laga yaabaa inuu ku kordho 40 milyan euro oo dheeri ah (£ 34m), sababtoo ah wakiilkiisa Mino Raiola iyo aabaha Alf-Inge ayaa doonaya midkiiba 20m euros (£ 17m) midkoodna guddiga qeyb ka ah heshiiska. (Marca)
Haaland ayaa heysata qandaraas lagu burburin karo 75m euros (m 64m) oo shaqeyneysa sanadka soo aadan laakiin waa laga yaabaa inuu baxo xagaagan hadii Dortmund ay sii wado halganka Bundesliga isla markaana ay weyso booska Champions League. (Thesun)
Xiddiga reer Norway ee Haaland oo 20 jir ah ayaa lala xiriirinayay kooxda Barcelona laakiin tababare Ronald Koeman ayaa sheegay in go, aan kasta oo ku saabsan u dhaqaaqistiisa ay tahay in uu gaaro madaxweynaha kooxda Joan Laporta. (AS)
Lionel Messi ayaa sugaya inuu arko soo jeedinta Laporta ee mustaqbalka Barcelona ka hor inta uusan go’aansan inta u dhexeysa inuu sii joogayo ama ka tagayo inuu ku biiro midkood PSG ama Manchester City. (Mundo Deportivo)
Angel di Maria ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ka garab ciyaaro saaxiibkiis reer Argentina ee Messi kooxda PSG hadii 33 jirkaan weerarka ka ciyaara uu ka tago Barcelona. (beIN Sports)
Tababaraha Leicester Brendan Rodgers ayaa rajeynaya inuu lasoo saxiixdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Scotland Callum McGregor, 27, oo ka socda kooxdiisii ​​hore ee Celtic. (Thesun)
Manchester United iyo Juventus ayaa ah kooxaha xiisaha ugu badan u qaba saxiixa weeraryahanka Barcelona iyo France Ousmane Dembele, oo 23 jir ah, laakiin Liverpool iyo PSG ayaa sidoo kale isha ku haya. (Mundo Deportivo)
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa u diray daafaca dhexe ee Jarmalka Antonio Rudiger horaantii tababarka Axadii ka dib markii ay murmeen goolhayaha reer Spain Kepa Arrizabalaga ka dib guuldaradii 5-2 ee Sabtidii ka soo gaartay West Brom. (Telegraph)
Spain Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Lucas Vazquez, ee 29 jir ah ayaa heshiiskiisa Real Madrid waxa uu dhamaanaya dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaa la xiriiridoona kooxaha Manchester United, Chelsea, AC Milan iyo Bayern Munich . (ABC)
Juventus uma badna inay bixiso 10ka milyan ee dheeriga ah (.5 8.5m) ee Atletico Madrid si ay heshiis kordhin amaah ah ugu kordhiso 28 jirka reer Spain Alvaro Morata hal sano oo kale sababtoo ah dhibaatooyin dhaqaale. (AS)
Daafaca dhexe ee Everton iyo Colombia Yerry Mina, 26, ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Serie A xagaagaan, iyadoo Inter Milan iyo Fiorentina ay labaduba isha ku hayaan . (Cadceed)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in weeraryahanka reer Argentina Sergio Aguero, oo 32 jir ah, uusan ka soo biiri doonin kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester City marka qandaraaskiisu dhammaado dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Goal)
Arsenal ayaa tartan kala kulmeysa seddex xafiiltan oo Premier League ah, iyo sidoo kale Paris St-Germain, oo ku aadan saxiixa joogtada ah ee ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Martin Odegaard. 22 jirkaan reer Norway ayaa 13 kulan u saftay Gunners tan iyo markii uu amaah ku yimid bishii Janaayo. (90min)
Weeraryahanka Red Bull Salzburg Patson Daka, 22, kaasoo dhaliyay seddex daqiiqo seddexleey kulankii Stum Graz Axadii, waxaa sii raacaya kooxo ay ku jiraan Liverpool, Arsenal, Manchester United iyo Everton. (Dailystar)
Liverpool iyo Manchester United ayaa ka fikiraya sidii ay ula soo saxiixan lahayeen 23 jirka daafaca Fiorentina Nikola Milenkovic ka dib qaab ciyaareed liita oo uu dhawaan ku soo bandhigay Serbia. (Teamtalk)